बिबिसी-विगत केही दिनदेखि काठमाण्डू उपत्यकामा समेत गर्मी बढेको महसुस भएको उपत्यकावासीहरूले बताउन थालेका छन्।कतिपयले त तराईको तापक्रमसँग तुलना गर्दै काठमाण्डूमा पनि उत्तिकै गर्मी हुन थालेको समेत भन्ने गरेका छन्। जल तथा मौसम विभागका विगत केही दिनको विवरणहरू हेर्दा पनि कतिपय तराईका शहरहरू र काठमाण्डू उपत्यकामा तापक्रम उस्तैउस्तै देखिएको छ।
उपत्यकावासीका भनाइमा काठमाण्डूमा विगत केही वर्षदेखि हरेक वर्ष गर्मी बढेको महसुस हुने गरेको छ। विभागका अनुसार शनिवार काठाण्डूको अधिकतम तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियसम्म पुगेको थियो भने आइतवार दिउँसो ३२ डिग्री सेल्सियसकै हाराहारी तापक्रम पुगेको छ। शनिवार विराटनगरको तापक्रम ३४.५ डिग्री सेल्सियस थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी वरिष्ठ मौसम विज्ञ अर्चना श्रेष्ठले बीबीसी नेपाली सेवालाई भनिन्: “यसपटक गर्मी बढेको अनुभव गर्नुमा जलवायु परिवर्तन र बढ्दो शहरीकरण नै हो।”
हामीले काठमाण्डू उपत्यकामा साच्चै हरेक वर्ष तापक्रम बढ्दै गएको हो वा मानिसहरूलाई त्यस्तो अनुभूति मात्र भएको हो? भनी मौसम विज्ञ श्रेष्ठलाई सोधेका थियौँ। सामान्यरूपमा विगत ४० वर्षको विवरण हेर्दा काठमाण्डूमा र पहाडी क्षेत्रमा मनसुनपूर्व र मनसुनका बेलामा अधिकतम तापक्रम बढ्दै गएको देखिन्छ। सन् १९७१ देखि २०१४ सम्मको तुलना गर्दा यी क्षेत्रमा हरेक वर्ष ०.४५ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढेको देखिन्छ। तर गत वर्षकै तुलनामा यसपटक गर्मी बढेको अनुभव गर्नुमा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा तापक्रम वृद्धि भएको भन्दा पनि अन्य कारण छन्।
त्यसको एउटा कारण भनेको काठमाण्डू उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरण नै हो। यस क्षेत्रमा न हरियाली छ, न त भेन्टिलेसन राखेर हावा वारपार हुने गरि घर बनाइन्छ। यसले गर्दा यो क्षेत्रमा आद्रता बढिरहेको छ। जसका कारण मानिसहरूले एकदमै गर्मी र अफ्ट्यारो अनुभव गर्ने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन सम्बन्धी एउटा अध्ययन गर्दा हामीले काठमाण्डू मात्र होइन अन्य पहाडी क्षेत्रमा पनि तराईको तुलनामा तापक्रम अझ धेरै बढेको पाएका छौँ। हरेक वर्ष यस्तो अवस्था देखिनुको कारण भनेको जलवायु परिवर्तन र विश्वभर भएको तापमान वृद्धि नै हो।
पहाडमा नै किन बढी असर देखियो भन्नेमा एउटै कुरालाई मात्र कारणका रूपमा हेरेर हुँदैन। तर चिसो क्षेत्रमा तापक्रम एकदमै संवेदनशील हुने भएकाले तापक्रम छिटो बढेको हुनसक्छ।काठमाण्डूमा गएको ४० वर्षमा सबैभन्दा अधितकतम तापक्रम साढे ३६ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको रेकर्ड छ। सन् १९८९ मे ७ तारिखका दिन काठमाण्डूको तापक्रम ३६.६ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। जुन महिनाको हेर्दा चाहिँ सबैभन्दा बढी तापक्रम सन् २०१२ मा ३५.२ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको देखिन्छ।काठमाण्डू र अन्य उपत्यका क्षेत्रमा गर्मी बढ्दा पानी पर्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। तर त्यसका लागि वातावरण कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। पोल्ने खालको घाम लाग्दा पानी पर्दैन तर धेरै पसिना आउने खालको गर्मी बढ्यो भने पानी पर्ने सम्भावना हुन्छ। (फाईल तस्बिर)
अहिलेका धेरैजसो बच्चालाई घरमा खाना कसरी आउँछको त कुरै छोडौँ, कसरी पाक्छ थाहा छैन । खाना जीवनमा महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, अहिलेका सन्तानले त्यसको महसुससम्म गरेका छैनन् । विश्वमा जहाँ पुगे पनि आफैँले बनाएको खाना खानु राम्रो हो । रेस्टुरेन्टको खाना या फास्टफुड सधैँ खाने हो भने त्यसले स्वास्थलाई लामो समय साथ दिँदैन । छोराछोरी र बाबुआमाको सम्बन्ध विगतमा जस्तो थियो त्यसरी अघि बढिरहेको छैन । कतिपय बाबुआमा छोराछोरीको नजरमा आफू करिबकरिब एटीएम मेसिनझैँ महसुस गरिरहेका छन ।
पैसा चाहियो भने सन्तान राम्रो बोल्छन् या सन्तानले राम्रो मुखले बोले भने उसलाई पैसा चाहिएछ भनी बाबुआमाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकारको सम्बन्धले सन्तानले पाल्छन् भन्ने हाम्रा सोचहरू परिवर्तन गर्न मद्दतचाहिँ पुगेको छ । तर, बाबुआमामा एकप्रकारको असुरक्षित भावना बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । सन्तानप्रतिको चिन्ता पनि त्यत्तिकै छ ।
अहिलेको युवापुस्ता हामीजस्तो साँझ १० बजेपछि सुत्दैन । रातभरि नेटमा बस्नु, बिहानभरि सुत्नु उनीहरूको दिनचर्याझैँ बनेको छ । छोराछोरीको पौरखको कुरा टाढै राखौँ, उनीहरू राम्ररी बोलिदिँदा बाबुआमाले खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ । खासै काम केही छैन, तर छोराछोरी उठ्दै तनावमय मुहारमा देख्ने बाबुआमाको सङ्ख्या बढ्दै छ । के भयो ? किन उदास छौ भनेर आफ्नै छोराछोरीलाई सोध्न नमिल्ने अवस्थामा बाबुआमा छन् ।
हाम्रो पालामा जस्तो स्कुल गएदेखि घर फर्किएसम्मका कहानी छोराछोरीले बाबुआमालाई सुनाउँदैनन् न त बाबुआमाकै कुरा सुन्छन् । स्कुल–कलेजले देखाइदिएका सपना अभिभावकका लागि अर्को चुनौती हुन् । नेपालमा त पढ्ने कलेज नै छैनन् जस्तो गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेशी कलेजका सपना प्लस टु, ए लेभलवाला कलेजहरूले देखाउँछन् । पूरा हुनेको ठीकै छ, पूरा नहुँदाको फ्रस्टेसन–व्यवस्थापन स्कुल–कलेजले गर्दैनन्, बाबुआमा आफैँले गर्नुपर्छ, जसको मूल्य त्यति सहज हुने गरेको छैन ।